Xirmooyinka Tooska ah - Delta Injineeriyada Beljam
Kaydso qeybta "Xirmooyinka Xirmooyinka"
Khamiista, Luulyo 06, 2017 by Injineer Delta
Unugga Santuuqa Twin Box ee fudud - xirxirida tuubada
Cutubkani wuxuu ku tuurayaa dhalooyinka sanaadiiqda, buuq la buuxiyay. Photocell ayaa tirinaya dhalooyinka markii sanduuqa buuxsamo, qeybta leexiyaha ayaa dhalooyinka u weecisa mid kale, sanduuq 'madhan'.
Published in Xidhmada Xidhmada
Qaybta xamuulka xirmada sanduuqa
Qeybtaan wax lagu raro waxay ku shubtaa sanduuqyo ay ku jiraan dhalooyin madhan, oo ay ka buuxaan buuq. Tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah Photocell wuxuu cabiraa booska dhalada & dhalada waa lagu diiday goobta saxda ah.
Qalabka silo ee baakadka silo
Qeybtan silooda ah waxay ku shubtaa dhalooyinka 2 silos oo jilicsan (midba midka kale). Dhalooyinka waa la isku xoqayaa markay ku dhacaan gawaarida xamuulka qaada, sidaas darteed waxaa loo tiriyaa 'qiyaas ahaan'. Ka dib, waxaa lagu tuuraa silo, iyada oo loo marayo xulashada saxanka foorara.
Qeybtan xamuulka xirxiraya ayaa dhalooyinka ku shubaysa 2 silos oo jilicsan (midba midka kale). Dhalooyinka ayaa ka imanaya kuwa xamuulka qaada (oo istaagaya), waxaa loo tiriyaa si shaqsi ah waxaana loo tuuraa silo, iyada oo loo marayo xulashada saxanka qalooca.